Qaab dhismeedka Hawada (I) | Saadaasha Shabakadda
La jawiga waxaa loo qaybin karaa tiro cayiman oo lakabyo jiifa ah oo ay taageerayaan doorsoomayaal kaladuwan, sida cadaadiska, heerkulka, cufnaanta, halabuurka kiimikada, xaalada korontada iyo birlabta birta. Mid kasta oo iyaga ka mid ah waxaa suurtagal ah in la isku dayo in lagu waafajiyo qayb ka mid ah joogga sare iyo, xaaladaha ugu wanaagsan, qaabka qaabdhismeedka. Si kastaba ha noqotee, maaddaama ay weli jiraan gobollo jawiga ah oo la baarayo oo daraasadaha lakabyada sare ay yihiin kuwo dhowaan dhow, ma jiraan qeexitaanno guud oo la aqbalay oo heerarka kala duwan ah.
Una aragti dardaro dejintu waxay u oggolaaneysaa sameynta kala duwanaanshahaas, dhulka ilaa bannaanka waxaan lahaan doonnaa:
1. Guri. Ilaa heer sare oo sida caadiga ah la gaaro 80 km waa lakabkan koowaad, halka ay Halabuurka kiimikada waa isku mid, sharciyada gaasaska kaamil ah ayaa lagu dhammaystiray dhexdeeda, iyo qaab dhismeedkeeda qaybinta altitudinal ee cufnaanta, cadaadiska iyo heer kulka ayaa aasaasi ah.
2. Hetorosphere. Si ka duwan aaggii hore, gobollada kor ku xusan lumiyaan isku mid ahaanta ay ka kooban yihiin kiimikada, Shuruucda guud ee hidde-wadayaasha ayaan mar dambe la kulmin waxaana qabanqaabada lakabyada lagu gartaa isku-darka halkii ay ka ahaan lahayd astaamaha jirka; sidaas darteed, waxaan ka hadalnaa lakabka ah nitrogen kelli (ilaa 200 km sare), laga bilaabo oksijiin atom ah (oo u dhexeysa 200 ilaa 1.000 km), oo ka mid ah Hélio (inta udhaxeysa 1.000 ilaa 3.500 km), iwm. Isla mar ahaantaana, maqnaanshaha isku-dhafka qas ee cufnaanta gaaska, kala-soocidda faafitaanka ayaa dhacda oo gaasaska culus ayaa hoos isugu urura, halka gaasaska fudud ay u janjeeraan inay xoogga saaraan heerar sare oo ay uga baxsan karaan dhulka cufis-jiidka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Qaab dhismeedka Hawada (I)